Tag: Donald | Sagal Radio Services
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ka hadlay askari looga dilay Soomaaliya
Donald Trump oo ku guuldareystay in la bedelo Adeegii caafimaadka ee Obamacare
Sagal Radio Services • News Report • March 25, 2017
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Xisbigiisa Jamhuuriga ayaa ku fashilmay in la bedelo barnaamijkii adeega caafimaadka ee Obamacare, kaasoo uu horay u balanqaaday inuu meesha ka saari doono intii uu ku guda jiray ololihii doorashada.
Trump oo xaakim cusub u magacabaay maxkamadda ugu sarreysa Mareykanka
Sagal Radio Services • News Report • February 1, 2017
Madaxweyne Donald Trump ayaa u magacaabay Neil Gorsuch in uu xubin ka noqdo xaakimiinta Maxkamadda Sare ee dalkaasi.
Donald Trump oo si layaab leh uga hadlay ninkii Soomaaliga ahaa ee weeraray Jaamacadda Ohio
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka, Donald Trump ayaa sheegay in ninkii Soomaaliga ahaa ee dhowrka qof ku dhaacaway jaamacad ku taalla Ohio ka hor inta aan isaga la toogan uu ahaa qaxooti aan mudneyn inuu markii horaba dalka sii joogo.
Donald Trump “Soomaalida Masiibo weyn ayay ku yihiin Minnesota & gobolada kale”
Donald Trump oo ah musharaxa xisbiga Jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa markale weerar afka ah ku qaaday Soomaalida ku nool gobolada dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota.
Donald Trump “Tiradii ugu badneyd ee Qaxootiga Soomaalida ee Minnesota ayaa ku biiray Daacish”
Donald Trump oo ah ninka la filayo inuu noqdo Musharaxa Xisbiga Jamhuuriga ee doorashada Madaxweynaha Mareykanka ayaa mar kale ku celiyay baaqiisa ahaa in Muslimiinta laga mamnuuco Mareykanka.
Baarlamaanka Britain oo ka doodaya in Musharaxa Donald Trumb laga manuuco inuu dalkaas galo
Sagal Radio Services • News Report • January 19, 2016
Xildhibaanada Baarlamaanka Britain ayaa ka doodaya in Musharaxa Xisbiga Jamhuuriga Donald Trumb laga mamnuuco inuu soo galo dalkaas.